Football Khabar » ‘कोरोनापीडित’ किभलाई जिते पनि प्रशिक्षक कोम्यान खेलाडीबाट बेखुसी : खेलपछि के–के भने ?
‘कोरोनापीडित’ किभलाई जिते पनि प्रशिक्षक कोम्यान खेलाडीबाट बेखुसी : खेलपछि के–के भने ?
एजेन्सी, कात्तिक २०
च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा समूह चरणका सुरआती ३ वटै खेल जिते पनि स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यान हालसम्मको प्रदर्शनबाट खुसी हुन सकेका छैनन् । गत राति बार्सिलोनाले तेस्रो खेलमा आफ्नो घरेलु मैदानमा युक्रेनको क्लब डाइनामो किभलाई २–१ ले हरायो । तुलनात्मक रूपमा बार्सिलोनाले कमजोर टोलमाथि निकै कमजोर प्रदर्शन गरेको थियो ।
गोलकिपर मार्क आन्द्रे टर स्टेगेनबाहेक कोही पनि खेलाडीको प्रदर्शन ठीकठाक थिएन । हालसालै शल्यक्रियापछि ठीक भएर आएका टर स्टेगेनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेका थिएनन् भने बार्सिलोना गत राति हारको सिकार पनि हुन सक्थ्यो । किनभने, किभका पटक–पटकका कठिन आक्रमण टर स्टेगेनले विफल तुल्याइदिएका थिए । बार्सिलोनाका लागि कप्तान लिओनल मेस्सीले पेनाल्टीमार्फत् १ गोल गरे भने जेरार्ड पिकेले विजयी गोल गरे ।
बार्सिलोनालाई सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय त यो छ कि, प्रमुख फरवार्ड मेस्सी यो सिजन चल्न सकेका छैनन् । उनले क्लबका लागि यो सिजन ९ खेलबाट मात्रै ४ गोल गरेका छन्, त्यो पनि सबै पेनाल्टीमार्फत् । ९ खेल खेलिसक्दा १ गोल पनि ओपन एरियाबाट गर्न नसक्दा मेस्सीको खराब लयलाई लिएर अनेक टिप्पणी हुन थालेका छन् । सायद अहिले बार्सिलोना र प्रशिक्षकलाई यदि कुनै कुराको चिन्ता छ भने त्यो मेस्सीकै खराब प्रदर्शनको निरन्तरताको छ ।
बार्सिलाना ला लिगामा निकै खराब स्थितिमा छ । यता, च्याम्पियन्स लिगमा सुरुका ३ वटै खेल जिते पनि प्रशिक्षक कोम्यानले आफ्ना खेलाडीको प्रदर्शनमा चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । गत रातिको खेलपछि उनले सार्वजनिक रूपमै आफ्ना खेलाडीमाथि धारणा राखे ।
गत रातिको खेलमा पाहुना टोली किभ ‘कोरोना भाइरस’को संक्रमणबाट पीडित थियो । उसको सिनियर टोलीका ६ जना खेलाडी कोरोनाका कारण टोलीमै थिएनन् भने पहिलो रोजाइका गोलकिपर समेत घाइते भएर खेलेका थिएनन् । किभको टोलीमा टिम ‘बी’ का गोलकिपरलाई खेलाइएको थियो भने टिम ‘बी’कै थप ५ खेलाडी सामेल थिए । तैपनि, बार्सिलोनालाई उनीहरूमाथि २–१ को साँघुरो जित निकाल्न हम्मेहम्मे परेको थियो । यो कुरा प्रशिक्षक कोम्यानलाई पनि चिन्ताजनक लागेछ ।
खेलपछि मिडियासँग कुरा गर्दै उनले च्याम्पियन्स लिगमा नतिजाका हिसाबले आफूहरू राम्रो अवस्थामा रहे पनि प्रदर्शनका हिसाबले ज्यादै चिन्ताजनक रहेको बताए । ‘नतिजा हेर्दा हामीले आजको खेल जित्यौं । हामीले सुरुका ३ वटै खेल जितेर ९ अंक जोडेका छौं । र, समूहको टपमा छौं,’ कोम्यानले भने, ‘तर, समग्र प्रदर्शनमा खुसी हुने र चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । आज हामीले निकै कमजोर खेल खेल्यौं । यो प्रदर्शनबाट हामी खुसी हुन सक्दैनौं ।’
कोम्यानले बार्सिलोनाले हालको स्थितिमा व्यापक सुधार गर्न नसके धेरै परसम्म पुग्न नसकिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘यसरी अघि बढ्दा हामी केही खेल जित्न सकौंला । तर, लामो यात्रा तय गर्न र उपाधि जित्न सकिँदैन । मलाई लाग्छ, हामीले थुप्रै ठाउँमा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्छ । सबैले गर्नुपर्छ । हाम्रा कमजोरी प्रशस्तै छन् ।’
कोम्यानले मेस्सीबाट यस्तो बेला हालको भन्दा धेरै राम्रो प्रदर्शनको अपेक्षा आफू र टिमले राखेको बताए । ‘मेस्सीजस्ता खेलाडीबाट यस्तो बेला योभन्दा धेरै राम्रो प्रदर्शनको अपेक्षा टिमले राख्छ, मैले राखेको छु । उनको क्षमता र स्तरमा मलाई शंका छैन । तर, अहिले उनले जति गरिरहेका छन्, त्यो धेरै नै कमी हो ।’
कोम्यानले गोलकिपर टर स्टेगेनको प्रशंसा गर्न भुलेनन् । ‘आज उनले आफूलाई साबित गरे । उनीबाट आज उत्कृष्ट प्रदर्शन भएको थिएन भने हामी यो खेल हार्न पनि सक्थ्यौं । म उनीबाट ज्यादै खुसी छु,’ कोम्यानले भने, ‘किभको टोलीमा आज थुप्रै कुराको कमी थियो । उनीहरूसँग केही प्रमुख खेलाडी थिएनन् । तैपनि, उनीहरूले हामीविरुद्ध उत्कृष्ट खेले । र, हामीलाई हरेक समय खतरामा पारिरहे । आज खेल हामीले जित्यौं, मन उनीहरूले जिते ।’
प्रकाशित मिति २० कार्तिक २०७७, बिहीबार ११:०७